प्रेम एकपटक हुन्छ कि बारम्बार ? - अब हाम्रो पालो - प्रकाशितः आश्विन १०, २०७३ - साप्ताहिक
आश्विन १०, २०७३
यो बानी हो । जो सँगै रहुन्जेल कायम रहन्छ, दूरी बढेपछि अर्कैसँग सामीप्यता बढ्छ । पत्याउनु हुन्न ? आफ्नै वरिपरिको समाज हेर्नुहोस्, प्रमाण देख्नुहुनेछ । श्रीमान् विदेशमा, श्रीमती अर्कैसँग भन्ने समाचार त्यत्तिकै त आएका होइनन् होला ।
अहिलेको युगमा प्रेमलाई खेलौना सम्झिइन्छ र कुनै पनि महिला वा पुरुषले बारम्बार प्रेम गर्छन्, तर साँचो प्रेमचाहिँ जीवनमा एकपटक मात्र हुन्छ ।
युवा–युवतीबीचको संकुचित प्रेमसम्बन्धका बारेमा नसोच्ने हो भने यो जति पटक पनि हुन सक्छ र जोसँग पनि हुन सक्छ ।
जीवनमा पवित्र र साँचो प्रेम त एकपटक मात्र हुन्छ । झूटो र लोभी अनि स्वार्थी प्रेम जति पटक गरे पनि त्यसको कुनै औचित्य छैन ।
प्रेम एकपटक, दुई पटक भन्ने हुँदैन, साँचो–झूटो भन्ने पनि हुँदैन । जुनसुकै बेला जो–कोहीसँग प्रेम हुन सक्छ भने त्यो समयक्रमसँगै हराउन पनि सक्छ ।
लामा फुरी लामा
प्रेम त बारम्बार हुन्छ । किनभने प्रेमका अनेक रूप छन् । कसैको नजरमा प्रेमी–प्रेमिकाबीच मात्र प्रेम हुन्छ तर प्रेम हरेक चिजमा छ, हरेक मानिसको मनभित्र प्रेम छ किनभने प्रेम पवित्र हुन्छ ।
पहिलो प्रेम एकपटक मात्र हुन्छ, तर अवसरवादीहरूको प्रेम बारम्बार हुन्छ । जब प्रेममा धोका हुन्छ तब दुई किनारको जिन्दगी न वार न पार हुन्छ ।
प्रेम हजारौं पटक हुन्छ । जीवनमा हरेक चिजसँग प्रेम गर्नुपर्छ । यदि गरिएन भने मान्छे कहिल्यै खुसी हुन सक्दैन । यसकारण पनि जिन्दगीमा हरेक चिजसँग बारम्बार प्रेम हुनु आवश्यक छ ।
जीवनमा एकपटक मात्र प्रेम हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो । मलाई त हरेक दिन प्रेम हुन्छ भन्ने लाग्छ । एकै दिनमा पनि पटक–पटक प्रेम हुन सक्छ । हो, म जब–जब ज–जसलाई सम्झन्छु तब–तब प्रेम हुन्छ ।
चेतन पन्थी निसान
हरेक चिज, हरेक वस्तु, मानिस मात्र होइन, हरेक प्राणीलाई हरबखत गरिने मायालाई नै प्रेम भनिन्छ । प्रेम हरबखत हुन्छ तर तन्नेरी भएपछि नारी र पुरुषबीच हुने प्रेम–प्रेम होइन, केवल वासना हो । एक–अर्काप्रति हुने आकर्षण हो, स्वार्थ हो ।
हाँसोलाग्दो कुरा, साँच्चै भनौं ? प्रेम भन्ने कुरै हँुदैन, हुन्छ त केवल चाहना मात्र, सँगै हुने सहयोग गर्ने चाहना ।
खासमा एकपटक हुनुपर्ने हो, तर कलियुगका मानिसहरूको मन असन्तोषी छ । त्यसैले बारम्बार हुन्छ ।
मनसँग प्रेम जीवनमा एकपटक हुन्छ, तर शरीरसँग पटक–पटक हुनसक्छ ।
प्रेम एकपटक हुन्छ र सधैंका लागि हुन्छ ।
एकपटकको प्रेम पनि के प्रेम ? प्रेम भनेको त बारम्बार हुनुपर्छ ।
प्रेम मानवीय गुण हो भन्दा फरक नपर्ला, यो जीवनपर्यन्त हुन्छ, भैरहन्छ ।
खोइ, आफ्नो त परिरहन्छ, प्रेम हो कि आकर्षण ? बुझ्नै सकेको छैन ।
समीर भट्ट राय
त्यति पनि थाहा छैन ? आफ्नै मनसँग सोध्नुहोसन्, के–के न जानेजस्तो किन गर्ने ?
प्रेम समय र मौका हेरेर गरिने चिज होइन, यो त अन्तर्आत्माबाट आउने अनुभूति हो, तर आजभोलि प्रेम निकै सस्तो भएको छ ।
प्रकाशित :आश्विन १०, २०७३